Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Platform dijitalụ ọhụrụ maka asọmpi Miss Universe
ImpactWay, usoro mgbasa ozi na-elekọta mmadụ, kwuputara mmekorita ya na Miss Universe Organisation na nkwado nke 70th MISS UNIVERSE Asọmpi, na-ebi ndụ gburugburu ụwa na Disemba 12, 2021, na 7 pm EST si Eilat, Israel.
ImpactWayv bụ ihe ọzọ na nyiwe ịkparịta ụka n'Ịntanet. Ọ na-arụ ọrụ dị ka ụdị gburugburu ebe obibi dijitalụ ọhụrụ kpamkpam, gbadoro anya na ọdịmma ọha yana na-enyere ndị ọrụ aka - ndị mmadụ, azụmahịa, na ndị na-abụghị ọrụ - imepụta, tinye aka na ma kesaa mmetụta mmekọrịta ọha na eze n'ọ̀tụ̀tụ̀ zuru ụwa ọnụ.
Ngwa ImpactWayv atọrọ ka ọ kwado mmekọrịta mmekọrịta ọha na eze zuru ụwa ọnụ na ntinye aka maka obodo zuru ụwa ọnụ nke ndị asọmpi Miss Universe sitere na mba 80, yana ndị na-akwado ha, ndị na-eso ụzọ ha na ndị na-ekiri ha gburugburu ụwa, na-eru ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara ijeri ndị na-ekiri ya.
Dịka akụkụ nke asọmpi MISS UNIVERSE nke iri asaa, ImpactWayv na-anabatakwa ihe ịma aka n'etiti ndị nnọchi anya niile iji mepụta "Mmetụta" kachasị na ngwa ImpactWayv n'etiti ndị na-akwado ha na ndị na-eso ụzọ ha. Mmetụta bụ metrik njikọ aka ọhaneze ọhụrụ nke ImpactWayv, na-atụle mmata ewepụtara na omume sitere n'ike mmụọ nsọ ọrụ n'elu ikpo okwu.
Ihe ịma aka nke ImpactWayv ghere oghe nye onye asọmpi ọ bụla wee na-aga n'ihu site na Disemba 11, 2021. Onye meriri n'ihe ịma aka ahụ, dị ka ekpebie site na oke mmetụta mmetụta na ihe okike zuru oke, ga-ekwupụta n'oge telecast dị ndụ wee nweta onyinye site na ImpactWayv ọrụ ebere nke onye asọmpi nhọrọ.